Epistemology के हो?
Epistemology के छ?
दर्शनको सत्य, ज्ञान र विश्वास
Epistemology को ज्ञान को स्वभाव मा जांच छ। शिक्षाको अध्ययन अध्ययन ज्ञान प्राप्त गर्न र कसरी सत्य र झूटो बीचको भिन्नता हुन सक्छ हाम्रो अर्थमा फोकस गर्दछ। आधुनिक epistemology सामान्यतया तर्कसंगत र अनुभववाद को बीच बहस छ । तर्कसंगततामा, ज्ञानको प्रयोगको माध्यमबाट ज्ञान हासिल भएको छ, जबकि अनुभव अनुभवले प्राप्त गरेको ज्ञान हो।
Epistemology किन महत्त्वपूर्ण छ?
Epistemology महत्त्वपूर्ण छ किनभने हामी कसरी विचार गर्छौं। कुनै ज्ञान बिना हामी कसरी ज्ञान प्राप्त गर्छौं, हामी कसरी हाम्रो इन्द्रमा भरोसा गर्छौं, र हामी कसरी हाम्रो दिमागमा अवधारणाहरू विकास गर्छौं। हाम्रो सोचको लागि हामीसँग कुनै सहज बाटो छैन। ध्वनि सोच र तर्कको अस्तित्वको लागि एक ध्वनि एपिस्टेमोलोजी आवश्यक छ - यसैले यति धेरै दार्शनिक साहित्यले ज्ञानको प्रकृतिको बारेमा प्रतीकात्मक आर्कसीय छलफलहरू समावेश गर्न सक्छ।
Epistemology किन अस्तित्वमा कुरा गर्छ?
कमेन्ट र कमिटिहरु बीच धेरै बहस मौलिक समस्याहरु को आसपास घूमते हो जसले मान्छे को पहिचान गर्दैन या कभी नहीं चर्चा गर्न को आसपास। यीमध्ये धेरैले प्रकृतिमा महाकाव्यहरू हुन्: यस विषयमा असहमत हो कि चमत्कारहरूमा विश्वास गर्न उचित छ, प्रकाश र धर्म स्वीकार गर्न प्राधिकरणको रूपमा, र त्यसोभए, पार्थिव रवादीहरूले आधारभूत उपशास्त्रीय सिद्धान्तहरूको बारेमा असहमति गर्दैछन्।
यो बुझ्न र विभिन्न प्राविधिक स्थितिहरू बुझ्न, व्यक्तिले एकअर्कालाई विगतका कुरा बोल्नेछ।
Epistemology, सत्य, र हामी किन विश्वास गर्छौं विश्वास
पाहुना र विशेषज्ञहरूले उनीहरूलाई के विश्वासमा फरक पार्छन्: विचारधाराहरू केही रूपमा विश्वास गर्छन्, पार्थिवहरू होइनन्। यद्यपि विश्वास वा विश्वासको तिनीहरूको कारण फरक फरक छ, यो पापीहरूको लागि सामान्य छ र विशेषज्ञहरूले पनि सत्यको लागि उपयुक्त मापदण्डलाई विचार गरेमा फरक छ र त्यसकारण, एक उचित विश्वासको लागि उचित मापदण्ड।
सम्पादकहरूले सामान्यतया परम्परा, अनुकूलन, प्रकाश, विश्वास, र अन्तराष्ट्रियता जस्ता मापदण्डमा निर्भर गर्दछ। पाहुनाहरूलाई सामान्यतया पत्राचार, सहनशीलता र स्थिरताको पक्षमा यी मापदण्डहरू अस्वीकार गर्छन्। यी अलग-अलग दृष्टिकोणहरू छलफल नगरेसम्म, कुन कुराहरूमा विश्वास गर्न धेरै बहस हुन सक्ने बहसहरू।
प्रश्नहरू Epistemology मा पूछे
हामी के जान्न सक्छौं?
हामी कसरी यो जान्न सक्छौं?
हामी किन केहि चीजहरू जान्दछौं, तर अरू होइन?
हामी ज्ञान कसरी प्राप्त गर्छौं?
के ज्ञान सम्भव छ?
के ज्ञान निश्चित हुन सक्छ?
हामी कसरी गर्न सक्छौं?
हामी किन निश्चित दावीहरू विश्वास गर्छौ र अरूलाई?
Epistemology मा महत्वपूर्ण ग्रंथहरू
ध्यान , रेन डार्टर्ट द्वारा
डेभिड ह्यूम द्वारा मानव प्रकृति मा उपचार
शुद्ध कारणको आलोचना , द्वारा
मानव लखनऊ को बारे मा एक निबंध जॉन लाक द्वारा
अनुभववादी र धैर्यवादको बीच के फरक छ?
त्यसोभए, हामी पश्चात् प्रासंगिक अनुभव पश्चात मात्र चीजहरू पत्ता लगाउन सक्छौं - यो पोटरियरियरी ज्ञानको रूपमा लिइएको छ किनभने पोस्टररिरीको अर्थ "पछि" हो। तर्कसंगतता अनुसार, हामीले अनुभव गरेका छौं भन्दा पहिले चीजहरू थाहा पाउन सम्भव छ - यो एक priori ज्ञान किनकी priori मतलब छ।
प्रतीक र तर्कसंगत सबै संभावनाहरु लाई निकास दिनुहोस - या त ज्ञान मात्र अनुभव पछि अधिग्रहण गर्न सकिन्छ वा कम से कम केहि ज्ञान अनुभव गर्नु भन्दा पहिले सम्भव छ।
त्यहाँ कुनै तेस्रो विकल्पहरू छैनन् (सायद, सम्भवतः विलुप्त स्थितिको लागि जुन सबै ज्ञान सम्भव छैन), त्यसो भए सबैले पनि एक तर्कसंगत वा अनुभववादी व्यक्ति हो जब यो ज्ञानको सिद्धान्तमा आउँछ।
ईश्वरहरु लाई विशेष रूप देखि या मुख्य रूप देखि अनुभववादी बनेको छ: उनि जोर देते हो कि सच्चा दावीहरुलाई स्पष्ट र मान्य प्रमाण संग अध्ययन गर्न सकिन्छ जो अध्ययन र परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसोभए यो कुरामा के फरक छ भन्ने कुरामा के हो? यो कुराले गर्दा यो कुरालाई अचम्म लाग्दछ। ब्रह्मांड भौतिकी हो जुन यसप्रकारहरूले अस्तित्वको अस्तित्वलाई मन पराउँछन् (विशेषगरी: परमेश्वरको दिमाग) र तर्कमा प्रकृति र अधिक आध्यात्मिक र अलौकिक छ।
रैतिकवाद एक समान पद होइन। केही तर्कसंगत तर्क मात्र तर्क हुनेछ कि वास्तविकताको बारे केही सत्यता शुद्ध कारण र विचार मार्फत पत्ता लगाउन सकिन्छ (उदाहरणहरू गणित, ज्यामिति र कहिलेकाही नै नैतिकताका सत्यहरू छन्), अन्य सत्यहरू अनुभवको आवश्यकता पर्दछ। अन्य तर्कवादीहरूले थप जान्छन् र तर्क र तर्कको बारेमा सबै तथ्यहरू सत्यको माध्यमबाट अधिग्रहण गर्नु पर्छ, सामान्यतया किनकि हाम्रो अर्थ अङ्गहरूले प्रत्यक्ष रूपमा वास्तवमा बाहिरको वास्तविकता अनुभव गर्न सक्दैनन्।
अर्कोतर्फ, भावनामा, अर्थ मा अधिक समानता छ कि यो स्वीकार गर्दछ कि तर्कसंगत कुनै पनि रूप सहि वा सम्भव छ। अनुभववादीहरूले अनुभवको माध्यमबाट कसरी ज्ञान प्राप्त गर्छन् र कुन अर्थमा हाम्रो अनुभवले हामीलाई बाहिरको वास्तविकताको पहुँच दिन्छ असहमत हुन सक्छ; यद्यपि, तिनीहरू सबै सहमत छन् कि वास्तविकताको बारेमा ज्ञान वास्तविकताको साथ अनुभव र अन्तरक्रियाको आवश्यकता छ।
क्लोनिंग इतिहासको समय
के टोम क्रूज केट होम्स 'प्लासेन्टा खाईयो?
1957 सुप्रीम कोर्ट निर्णय: रूथ वी। संयुक्त राज्य
Michele Bachmann मजाक
म्यूरिटिक एसिड भनेको के हो?
सेल्सियस र सेन्टिग्रेडको बीच के फरक छ?
20 जना केटाकेटीले स्कूलको तस्विरमा सबै भन्दा राम्रो बालकोट घुमाए
Ostara Rites र Rituals
कति लामो बिन्दु पोथी आखिरी?
मोनिका लुईंस्की झूट
राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबन्ध को संख्या
ऋण र ऋण समेकन ऋण को पेशेवर
आयरिश पेयिंग टोस्टहरू र उद्धरणहरू
एडोब - सतत र ऊर्जा कुशलको बारेमा सबै
नयाँ र अद्वितीय शिक्षक उपहार विचार
कुन "परिचय" र "एक्स्ट्रोवर्ट" साँच्चै अर्थ
तपाईको तराईको पोल फिल्टर कसरी सफा गर्नुपर्छ?
पेन्डिङ स्फिम फ्लक्स (गेटवुड) निदान, नियन्त्रण र रोकथाम
वेंटिर्थ टेक्नोलॉजीको जीपीए, एसएट र एक्ट डाटा
पाठ्यक्रम पाठ्यक्रममा बिंगो
कसरी पल अफ अफ प्ले गर्नुहोस्
अजीब क्लिनिक चित्रहरू
4/4 कहिलेकाहीं सी-आकारको प्रतीकसँग लेखिएको छ?
मिशिङको के हो?